Caalamka, 01 September 2017
Dunida Muslimka oo Maanta Looga Dabaaldagayo Ciidul Adxa
Muslimiinta ka badan halka bilyan iyo sideedda boqol ee million ee dunida ku nool ayaa xalay bilaabay badankood inay u dabaal degaan munaasabadda ciidul adha, ee lagu maamuuso maalinta sadexaad ee xajka, oo ka mid ah shanta tiir ee Islamka.
Ciraaq oo Ku Dhawaaqday Inay Qabsatay Tal Cafar
Ra’isulwasaaraha dalka Iraq Haider al-Abadi ayaa ku dhawaaqay in ay dib uga qabsadeen kooxda Daacish magaalada Tal Afar iyo guud ahaan gobolka Nineveh (Ninweh).
Malaayiin Xujaaj ah oo Maanta Taagan Banka Carrafa
Malaayiin xujaaj ah ayaa maanta ku cibaadeysanayay buurta Carafat si ay u gutaan waajibka xajka. Xujaajta waxaa ku jira kumannaan kun oo Soomaali ah oo ka kale yimid daafaha dunida.
Kim Jong Un oo ka Hadlay Gantaalka ay ka Dul Rideen Japan
Qarax Dad Badan Lagu Dilay oo ka Dhacay Kabul
Qof ismaadaamiyey ayaa weerar ku qaaday dad isugu soo baxay meel dibedda ka ah banki ku yaalla magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan, halkaasi oo uu ku dilay shan qof, islamarkaana uu sagaal kale ku dhaawacay, sida uu afhayeen ka tirsan booliska u sheegay VOA.
Rabshado Dhiig Ku Daatay oo Ka Dhacay Waqooyiga India
Kumannaan ka mid ah taageerayaasha nin Ilaahnimo sheegta oo Hindi ah oo lagu eedeeyey danbi kufsi ah ayaa bilaabay in ay ka baxaan xaruntiisa oo ku taala magaalada Sirsa kadib maalmo ay is hor taagnaayeen ciidamada ammaanka.
Milatariga Ciraaq oo Qabsaday Qeybo Ka Mid ah Tel Afar
Milatariga Ciraaq ayaa sheegay in ay dib uga qabsadeen kooxda Daacish inta badan magaalada Tal Afar ee ku taala dhinaca waqooyigalbeed ee dalka Ciraaq.
Kuuriyada Waqooyi oo Ridday Saddex Gantaal
Saraakiil ka tirsan ciidamada badda Mareykanka ayaa xaqiijiyey in Kuuriyada Waqooyi ay Jimcihii gantay dhowr gantaal oo ah kuwa riddada gaaban kuwaasoo midkoodna uusan gaarin bartilmaameedki loogu talagalay.
Weerar ismiidaamin ah oo lagu qaaday masjid shiicada ay ku tukadaan oo ku yaalla magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan ayaa lagu dilay 16 qof oo ay ku jiraan haween, caruur iyo saraakiil boolis.
Xulufada Sacuudiga oo Shacab ku Laayey Yemen
Duqeymo ay fuliyeen xulufada Sacuudiga uu hoggaamiyo ayaa ugu yaraan 12 qof oo shacab ah ku dilay magaalada Sanca ee caasimadda dalka Yemen, sida ay sheegeen goobjoogeyaal iyo shaqaalaha caafimaadka.
Hooyo Soomaaliyeed oo uu Ninkeedii Ku Dilay UK
Aasiya Cumar oo aheyd hooyo Soomaaliyeed oo dhalinyara ah ayaa Isniinti lagu dilay magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska, kadib marki uu toorreeyay seygeeda oo lagu magacaabo Aden Dahir.